Besilokhu siguqulela amaklayenti ku-Google Tag Manager kamuva nje. Uma ungakezwa ngokuphathwa kwamathegi okwamanje, sibhale i-athikili ejulile, Kuyini ukuphathwa kwamathegi? - Ngingakukhuthaza ukuthi uyifunde.
Ngaphandle kwezinzuzo zokuphathwa kwamathegi, iMenenja ye-Google Tag inokusekelwa okuthile komdabu kwezinhlelo zokusebenza ezinjengeGoogle Analytics nokuthi uzofuna ukuzisebenzisa. Ngoba i-ejensi yethu isebenza kancane kumasu wokuqukethwe wamakhasimende ethu, silungiselela i-GTM kuwo wonke amaklayenti ethu. Nge-Google Tag Manager ne-Universal Analytics, singakwazi ukumisa imininingwane eyengeziwe ngamaqoqo wokuqukethwe we-Google Analytics ngaphandle kokuhlela ikhodi eyinhloko kumasayithi amaklayenti ethu. Ukulungiselela laba ababili ukuthi basebenze omunye nomunye akuyona eyenhliziyo encane, noma kunjalo, ngakho-ke ngifuna ukukubhalela.
Uma ungakaze usethe i-akhawunti ye-Google Tag Manager ngaphambilini, kunesilekeleli esihle sokukuhambisa ngokusetha i-akhawunti yakho yokuqala nesiqukathi. Uma ungayiqondi i-verbiage engiyisebenzisayo, qiniseka ukuthi ubuke ividiyo kulokhu okuthunyelwe okukuhambayo!
Naka lapho uwafaka khona la ma-tag weskripthi, kubaluleke kakhulu ekuziphatheni kwanoma imaphi amathegi ozowaphatha ngaphakathi kwe-Google Tag Manager ngokuzayo!
Uma ulungiselela i-GTM usebenzisa i-plugin yomuntu wesithathu noma ukuhlanganiswa, uvame ukucelwa eyakho I-ID yokuqukethwe. Ngiqhubekele phambili ngakujikeleza lokho kusikrini-skrini esingenhla. Ungakhathazeki ngokuyibhala phansi noma ukuyikhohlwa, i-GTM yenza ukuthole kukuhle futhi kube lula ku-akhawunti yakho ye-GTM.